अख्तियारले छानविन शुरू गर्याे, काे–काे परे छानविनमा? « Deshko News
अख्तियारले छानविन शुरू गर्याे, काे–काे परे छानविनमा?
अाजकाे कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, नेपाल प्रहरीका एआईजीद्वय प्रतापसिंह थापा र विरेन्द्रबाबु श्रेष्ठसमेत अख्तियारको अकुत सम्पत्ति छानबिनको दायरामा परेका छन् । श्रेष्ठ यसअघि अख्तियारमा प्रहरी प्रमुख थिए । उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रवन्ध फाट प्रमुख हुँदा सार्क सम्मेलनका लागि प्रहरीलाई आवश्यक सामान खरिद गर्दा विवादमा मुछिएका थिए ।